MeetingHero - ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတွေ့ဆုံရန်အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု Martech Zone
MeetingHero - ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတွေ့ဆုံခြင်းအတွက် App တစ်ခု
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 10, 2014 Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်အေဂျင်စီများကဲ့သို့အစည်းအဝေးများအမြဲတမ်းရှိသည်။ အစည်းအဝေးများသည်အတွေးအမြင်နှင့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၏အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ သို့သော်အစည်းအဝေးများသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိနိုင်ပါ။ လူအများစုကအစည်းအဝေးတွေအမြဲတမ်းလိုချင်ကြပေမဲ့ကျွန်တော်မကြာခဏတွန်းလှန်တယ်။ အစည်းအဝေးများသည်အခွန်ကောက်ခံပြီးစျေးကြီးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်လူအများမိမိတို့၏တင်းပါးကိုဖုံးအုပ်လိုသောအစည်းအဝေးတစ်ခုသို့ရောက်သည်။ အခြားအချိန်များ၌မူသင်မပြီးဆုံးသေးသော်လည်းအစည်းအဝေးများကတစ်တန်ကိုပိုအလုပ်များစေသည်။
ငါမကြာသေးမီကမေးနေတဲ့ post ကိုရေးသားခဲ့သည်, အချည်းနှီးသောအစည်းအဝေးခန်းသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏အမှတ်လက္ခဏာလား။ နှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ငါပင်ပြောခဲ့တယ် အစည်းအဝေးများသည်အမေရိကန်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်.
ငါကနောက်တာမွာအပတ်တိုင်းနာရီ ၃၀ နဲ့အထက်အစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးကနေနုတ်ထွက်လိုက်တာ။ ငါမှာရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့၊ အဲဒီမှာနေရမယ့်အကြောင်းရင်းနဲ့လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်မရှိတဲ့ဘယ်အစည်းအဝေးမဆိုမသွားတော့ဘူး။ ကျွန်မရဲ့အစည်းအဝေးတွေဟာတစ်ပတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်နာရီအထိကျသွားတယ်၊ ငါဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်။
သူတို့ကပြောတာကတော့အရာရာတိုင်းအတွက် app တစ်ခုရှိတယ်၊ အခုငါတို့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်ခုပဲရနိုင်တယ် အစည်းအဝေး။ MeetingHero သည်မည်သည့်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန်အတွက်အရေးကြီးသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအချိန်မရွေးဖမ်းယူနိုင်သည်။
Real-Time တွင်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းပါ - အရေးပါသောအစည်းအဝေးများနှင့်ပူးပေါင်းရန်နှင့်ဖမ်းယူရန်လွယ်ကူသည်
တိုတောင်းအာရုံစိုက်အစည်းအဝေးများ - MeetingHero သည်သင်နှင့်သင်၏အသင်းအတွက်အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်၊ မျှဝေရန်နှင့်စွဲစွဲမြဲမြဲပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်၊ သို့မှသာသင်အာရုံစူးစိုက်နိုင်မည်၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောစကားစမြည်ပြောဆိုမှုများ၊
နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမောင်း - သင်၏အစည်းအဝေးအတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပမာဏမျှသာကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် MeetingHero သည်သင်၏အဖွဲ့အားဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်နှင့်နောက်အဆင့်များကိုသဘောတူရန်လမ်းညွှန်သည်။
Shareable အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူအသိပေးနေပါ - အစည်းအဝေးတိုင်းသည်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သော၊ မျှဝေနိုင်သောအစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်ရှိသည်။ သို့မှသာသင်အစည်းအဝေးများကိုကျော်တက်နိုင်ပြီးသတင်းပို့နိုင်သည်။
အားလုံးသင်၏အစည်းအဝေးမှတ်စုများ - MeetingHero သည်သင်၏တွေ့ဆုံမှုမှတ်စုများအားလုံးကိုသင်၏အစည်းအဝေးအားလုံးမှစုစည်းပေးသည်။ သို့မှသာသင်ဘာပြောခဲ့သလဲ၊ မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်နှင့်မဖြေရှင်းနိုင်သောအရာများကိုသင်အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သည်။
ပြက္ခဒိန်ပေါင်းစည်းရေး - MeetingHero သည်ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန် (အခြားသူများမကြာမီလာမည်) နှင့်စည်းညှိသည်။ သို့မှသာလူများအားသင်အမြဲပြုလုပ်သည့်အစည်းအဝေးများသို့လူများကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်သည်။ ထိုအစည်းအဝေးများသည်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန် MeetingHero ကိုသုံးနိုင်သည်။
Tags: အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်app ကိုပြက္ခဒိန်ပြက္ခဒိန်ပေါင်းစည်းမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်များဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်အစည်းအဝေးညီမလေးအစည်းအဝေးများမိုဘိုင်း app
11:2014 pm မှာဇွန် 5, 55
အစည်းအဝေးတွေကတစ်ခါတစ်လေကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ငါမင်းနားလည်တယ်၊ သံသယဖြစ်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာငါတို့အားလုံးကိုအနုပညာတစ်ခုခုကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်၊
ငါအတော်လေးလန်းဆန်းအချို့အစည်းအဝေးများထဲကရ။ ငါဒီ app ကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကသိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ အထူးသဖြင့်သင့်ပို့စ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ကြိုက်တယ်၊ ယခုတွင်ငါသည် Exquisitus အမည်ရှိကုမ္ပဏီမှ The Meetings ဟုခေါ်သောအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုနေသည်။ ၎င်းတွင်သင်တစ်ခါမျှမစဉ်းစားဖူးသောအရာများရှိသည်။
16:2014 pm မှာဇွန် 9, 44
၎င်းသည်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်အလွန်သဘောကျသည်။ သင်မလုပ်နိုင်သည့်အခြေခံများ (ပြက္ခဒိန်ရက်ချိန်းများသာဖြစ်သောသင်၏အစည်းအဝေးများကိုပြက္ခဒိန်ထပ်တူပြုခြင်းမှပယ်ဖျက်။ မရပါ) သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဇွန် 16, 2014 မှာ 3: 34 pm တွင်
ကြီးစွာသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုခရစ်! ဒီအချက်အလက်ကိုဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါဘတ်ဂျက်အစည်းအဝေးတစ်ခုသေးငယ်တဲ့နည်းနည်းကူညီပေးသည်ကြောင်းအရာအားလုံးကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်ထင်!